မောငျ(စှယျစုံကမျြး): February 2014
ပိုတိုရှော့အတွက်အင်္ကျီလေးတစ်စုံကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ယောင်္ကျာလေးတွေ
ကျွန်တော်လည်းဒီအင်္ကျီလေးကိုသဘောကျမိလို့ ဖန်တီးထားတာပါ ကဲသူငယ်ချင်းတို့သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်ဗျာ
Author Unknown at 10:56:00 AM0မှတ်ချက်
အချစ်ရောဂါ - သက်ဆုနဒီ (Album) 2014
Author ၀ီရရဲရှိုင်း at 10:33:00 AM0မှတ်ချက်
Mavis Beacon Teaches Typing Platinum 20 (96.81MB)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတင်ပေးမှာကတော့ သူငယ်ချင်းတို့ကွန်ပျူတာနှိပ်ရင် လက်ကွက်ရိုက်တာနှေးနေသလား စိတ်မပူပါနဲ့ ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့သာ လက်ကွက်ရိုက်လေ့ကျင့်လိုက်ပါ လက်ကွက်ဆရာကြီးအဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်း လက်ကွက်ရိုက်တာမမြန်ပါဘူး ဒီကောင်လေးနဲ့လေ့ကျင့်နေတုန်းပါပဲ သူငယ်ချင်းတို့လည်းလက်ကွက်လေ့ကျင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်
Author Unknown at 8:00:00 PM0မှတ်ချက်
မိမိ တို့ဖုန်း က နေ မြန်မာပြည် မှ ၀က်ဆိုဒ် တွေ ကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေ ရ တဲ့ဆော့ ၀ဲနော်..
လူမှု့ ရေး ဘာသာ ရေး တေးဂီတ အနုပညာ ရှင် များရဲ့page လိပ်စာ အစသဖြင့်အကုန်လုံးကိုထည့် သါင်းပေးထား တာ ကို တွေ့တဲ့တွက် အသုံးပြု သူများ အနေ နဲ့အဆင်ပြေမယ် လို့မျှော်လင့်တယ်.နော်
သုံး ကြည့်ချင် တဲ့သူငယ်များအတွက် ဒီ မှာ ရှိတယ်နော်...
ဒီမှာ MM Website Directory-8 apk
သူငယ်ချင်းအား လုံးအဆင်ချောမွေ့စွာ နဲ့အသုံးပြုနိုင် ကြပါစေဗျာ
Author လမင်းချစ်သူ at 10:34:00 PM2မှတ်ချက်
Labels: Phone အတွက် မြန်မာလိုဆော့ဝဲ
ချစ်သူများနေ့အတွက် valentine's day frames လေးနော်
မနက်ဖြန် ကျရောက် မည့် ချစ်သူများနေ့ မှာ ကိုယ့်ချစ်သူ နဲ့ပုံလှလှ တွေ ကို Frame လှလှ လေး နဲ့ 
သိမ်းထားချင်သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေသလို ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်သူနဲ့ ဝေးနေတဲ့ သူတွေ အတွက် လည်း အဝေးက နေ ချစ်သ ရဲ့အမှတ်တရ ပုံ လေးတွေ ကို လုပ် ပေးလို့ရ ပါ တယ်
သူငယ်တို့ အနေ နဲ့အနေ နဲ့အသုံးလိုတယ် ဆိုရင် ဒီမှာရှိတယ်နော်........
Author လမင်းချစ်သူ at 9:46:00 PM0မှတ်ချက်
MP3သီချင်းလေးတွေကိုကိုကြိုက်တဲ. ဆိုဒ့် ပြောင်းလို.ရမဲဆော့ဝဲလ်လေးပါ
အရမ်းကောင်းပါတယ် ကိုကြိုက်တဲ.ဖော်မက်မျိူးစုံ ဒက်ဆီဘယ်ဘေစ်အမျိူးမျိူး
Author ၀ီရရဲရှိုင်း at 8:53:00 PM0မှတ်ချက်
ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၅)ရက်နေ့ ထုတ် Tech Space ကွန်ပျူတာ၊ သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာ ဂျာနယ် Vol2Issue 46
Tech Space Vol2Issue 46
.nes ဂိမ်း 100 ကျော်စုစည်းပေးထားပါတယ် . nes ဂိမ်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့
သူငယ်ချင်းတို.ရဲ MP4/5 DVD player တွေနဲ့ PSP တွေမှာထည်.ဆော့နိုင်မဲ့
ဂိမ်းလေးတွေပါ ယူအက်ဘီ ပေါက်ပါတဲ့အောက်စက်တွေမှာလည်းထိုးပြီးဆော့
နိုင်ပါတယ် 3D ဂိပ်း 30 ကျော်ပါဝင်ပါတယ် ရှာဖွေပြီးစုစည်းပေးထားတာပါ
.nes ဂိမ်းတွေ ကအွန်လိုင်းမှာရှာရတာအဆင်မပြေပါဘူး ဒါကြောင့်စု
Author ၀ီရရဲရှိုင်း at 10:46:00 AM0မှတ်ချက်
Author Pyae Phyo (MMiTD) at 4:28:00 PM0မှတ်ချက်
1 မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဝိမလ 70060
2 မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသောဘန 16105
3 မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဇနကာဘိဝံသ 18090
4 တိပိဋကဓရ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရဘိဝံသ 30312
5 ရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ပဏ္ဍိတာဘိဝံသ 8740
6 ချမ်းမြေ့ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ 19973
7 ဖားအောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်အာစိဏ္ဏ 11840
8 ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇောတ (တောင်စွန်း) 10183
9 ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ 36987
10 သဇင်ရေကျော်ဆရာတော် အရှင်ဥာဏောဘာသ 9840
11 အောင်ဆန်းဆရာတော် အရှင်သဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ 7931
12 ကျစွာချောင်ဆရာတော် အရှင်လက္ခဏ 16148
13 ဖြူးဆရာတော် အရှင်နရပတိ 21324
14 ထူးကြီးဆရာတော် အရှင်က္ကန္ဓာဝုဓာဘိဝသံ 5616
15 အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်) ရွှေပြည်သာ 48783
16 တွံတေးဆရာတော် အရှင်ဣန္ဒက 8054
17 ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာအရှင်ပညိဿရ 10787
18 အရှင်ပုညာနန္ဒ (ပုညာရာမကျောင်းတိုက်) 10410
19 ပိုင်းလော့ဆရာတော် အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ 11221
20 ဆရာတော်ဥုးသုမင်္ဂလ (မင်္ဂလရိပ်သာ) 33950
21 ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ 29836
22 ဆရာတော်ဦးဃောသိတ (မိုးကုတ်) 12160
23 သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဥက္ကဌ 10847
24 သဒ္ဓမ္မရံသီဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ကုဏ္ဍလာဘိဝံသ 7596
25 သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရ 68960
26 ကျိုက္ကလော့ဆရာတော် အရှင်စန္တာဝရာဘိဝံသ 6681
27 ဆရာတော်ဦးရေ၀တ (ဖားအောက်တောရ) 6646
28 ဓမ္မရံသီဆရာတော် အရှင်သုနန္ဒ (မိုးကုတ်) 13230
29 ဓမ္မဘေရီဆရာတော် အရှင်ဝိရိယ (တောင်စွန်း) 6413
30 အရှင်ပညာနန္ဒ (သီတဂူကြယ်တပွင့်) 8746
31 မောင်းထောင်မြေဇင်းတောရဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်သောဘိတ 7706
32 ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဒေါက်တာအရှင်ကုမာရာဘိဝံသ 22045
33 မုံလယ်တောရဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသံဝရ 6000
34 မြစိမ်းတောင်ဆရာတော် အရှင်ဇာနေယျ 19775
35 ၀န၀ါသီ မြောက်ဦးဆရာတော် အရှင်ဝါယာမိန္ဒ 13697
36 တိပိဋကဓရ မြင်းခြံဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တဂန္ဓမာလာလင်္ကာရ 6415
37 ပခုက္ကူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ ဣန္ဒောဘာသ 4415
38 မူလကသစ်ဝိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ရေ၀တ 4575
39 အရှင်အာစရာလင်္ကာရ (စစ်ကိုင်းရွှေင်္ဟသာ) 12913
40 ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ကုမာရ 6462
41 ၀န၀ါသီ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဥေယျဓမ္မသာမိ 4909
42 အရှင်ဝိလာသဂ္ဂ (သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ) 3436
43 အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ (ရန်ကုန်ပဉ္စနိကာယ်ကျောင်းတိုက်) 4825
44 ချမ်းမြေ့မြိုင်ဆရာတော် အရှင်တေဇာသာရ 10860
45 အရှင်ဇောတိက (ပခုက္ကူ လေယာဉ်ကွင်းဆရာတော်) 5618
46 တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥတ္တမသာရ 21718
47 ပတ္တမြားရိပ်သာဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်သောဘိတ 3985
48 ဆားတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ပညာဏိက 3552
49 ဒုတိယတော်ကူးဆရာတော်ကြီး အရှင်နာဝိက 3473
50 ဆရာတော်အရှင်ဧသက (Azusa) 4575
51 အရှင်ဇနိတာလင်္ကာရ (မိုးကုတ်ဝိပဿနာ) 3501
52 ခင်မကန်ဆရာတော် အရှင်ခေမိန္ဒ (စစ်ကိုင်း) 4596
53 မေတ္တာအေးဆရာတော် အရှင်သုဇာတ 6632
54 စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးက၀ိ 13231
55 ၀န၀ါသီ ကျောက်တလုံးတောရ အရှင်ဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ 4492
56 ရွှေမင်းဝံဆရာတော် အရှင်သောဘန 4955
57 ရွှေမြင့်မိုရ်ဆရာတော် အရှင်သောဘဏ (ပိဋကတစ်ပုံဆောင်) 3657
58 ဆရာတော်ဦးသုမန (စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး) 3883
59 အရှင်ဆန္ဒာဓိက (ရွှေပါမီတောရ) 9191
60 မင်းကွန်းဓမ္မစေတီဆရာတော် အရှင်နာဂိန္ဒာလင်္ကာရ 2146
61 ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဝရ (သိမ်ဇရပ်) 2358
62 မူလဓမ္မဆရာတော် အရှင်ဝိဇယ 1730
63 အောင်လံဆရာတော်အရှင်စန္ဒိမာ (သဲအင်းဂူ) 4021
64 ဒေါက်တာအရှင်သီလာနန္ဒာဘိဝံသ (USA) 2871
Author ၀ီရရဲရှိုင်း at 9:49:00 PM 1 မှတ်ချက်
Panda Pop BT v1.2
Author ၀ီရရဲရှိုင်း at 9:03:00 AM0မှတ်ချက်